आधिकारिक रुपमै भेटियो नेपालमा दोस्रो कोरोना भाइरस संक्रमण, अब चुनौति उनीसँग सम्पर्कमा आएकाहरु पहिचान गर्ने – MySansar
आधिकारिक रुपमै भेटियो नेपालमा दोस्रो कोरोना भाइरस संक्रमण, अब चुनौति उनीसँग सम्पर्कमा आएकाहरु पहिचान गर्ने
गत चैत ४ गते फ्रान्सबाट कतार हुँदै काठमाडौँ फर्किएका एक नेपालीमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण भेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज मध्याह्न गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ। चैत ४ गते काठमाडौँ फर्किएपछि ती किशोरी होम क्वारेन्टिनमा बसिरहेकी थिइन्। उनको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा परीक्षण गर्ने क्रममा हिजो कोभिड १९ पोजिटिभ भेटिएको हो। हाल उनलाई शुक्रराज सरुवा रोग अस्पतालमा आइसोलेसनमा राखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालसहित उपस्थित पत्रकार सम्मेलनमा यो जानकारी दिइएको हो।
चैत ४ अर्थात् मार्च १७ मा फ्रान्सबाट कतारको दोहा ट्रान्जिट हुँदै काठमाडौँ आएकी किशोरीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भेटिएपछि अब उक्त फ्लाइटमा आएका अरुहरुलाई पनि संक्रमण भए नभएको पहिचान गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ।
उनी काठमाडौँ आएपछि होम क्वारेन्टिनमा बसिरहेकी भनिएको हुनाले त्यहाँबाट थप संक्रमण चाहिँ हुन नपाएको आशा गरौँ।
एक व्यक्तिबाट कसरी संक्रमण फैलिन सक्छ भन्ने उदाहरण दक्षिण कोरियाको ३१ औँ संक्रमित व्यक्तिबाट पाउन सकिन्छ। रोयटर्सले यसबारेमा एउटा राम्रो प्रस्तुति दिएको छ। यहाँ क्लिक गरी हेर्न सकिन्छ।
यो भिजुअलाइसेन अनुसार दक्षिण कोरियामा ३० जना संक्रमित व्यक्ति भेटिँदासम्म स्थिति नियन्त्रणमा नै थियो। तर ३१ औँ संक्रमित व्यक्ति भिडभाडमा गएपछि धेरै व्यक्तिमा यो सर्‍यो। ती महिला डेगुको भिडभाड भएको ठाउँ र राजधानी सउलको पनि भिडभाड भएको ठाउँमा गएकी थिइन्। ट्राफिक दुर्घटनामा परेपछि उनी अस्पताल पनि पुगेकी थिइन्। त्यस्तै चर्चमा पनि प्रार्थनाका लागि पुगेकी थिइन्। त्यतिबेलासम्म उनमा कुनै लक्षण देखा परेको थिएन। फेब्रुअरी १६ मा ज्वरो आएपछि बल्ल उनमा संक्रमणको आशंका गरिएको थियो।
ठीक यसको विपरीत सेल्फ आइसोलेसनमा बस्यो भने कसरी संक्रमण फैलिनबाट रोकिन्छ भन्ने उदाहरण त नेपालकै छ। छिमेकी भारतमा समेत कोरोना संक्रमण नभेटिएको अवस्थामा नेपालमा पहिलो संक्रमण पुष्टि भएको थियो। तर ती पुरुष व्यक्तिले घरैमा कडा अनुशासन पालना गरी क्वारेन्टिनमा बसेका थिए। यसका कारण कयौँ दिनसम्म नेपालमा कतै पनि थप संक्रमणका घटना भेटिएनन्।
यो मन्त्रालयकै प्रिजेन्टेसनमा देखाइएको ती पुरुषको घटना हो। ३२ वर्षका ती नेपाली पुरुषलाई चीनमा हुँदा नै खोकी लागेको रहेछ। २४ पुसमा उनी वुहानबाट कुन्मिङ हुँदै काठमाडौँ आए। २८ पुसमा टेकुमा उपचारका लागि पुगे। माघ १ मा उनको नमूना लिइयो। सामान्य ज्वरो र स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार देखेपछि ३ माघमा डिस्चार्ज गरियो। २८ पुस र १ माघमा लिइएको स्याम्पल हङकङमा पठाइयो ७ माघमा। ९ माघमा चाहिँ उनलाई कोभिड १९ संक्रमण भएको पुष्टि भयो।
उनले घरमा आफूलाई कसरी सुरक्षित राखेका थिए र कसरी संक्रमण फैलिन दिएका थिएनन् भन्ने बारे नेपाल समाचारपत्रमा उनको अनुभव आएको थियो। यस्तो थियो उनको अनुभव-
चीनबाट काठमाडौं हुँदै नेपालगन्जसम्मको यात्रा पूरा गरी घर पुग्दा ज्वरो आयो। तत्काल नेपालगन्जबाट पुनः काठमाडौं फर्केँ र सरुवारोग अस्पताल शुक्रराज ट्रपिकल टेकु पुगेँ। सामान्य बिरामीसरह दुई घण्टा लाइन बसेर ल्याब परीक्षण गराएँ।
ल्याब परीक्षणको रिपोर्ट आउन दुईदेखि तीन दिन लाग्ने भएकाले टेकू अस्पतालको विशेष कक्षमै भर्ना गरियो। तर म अस्पतालको वातावरण देखेर निराश भएँ र अस्पताल छोडें। अस्पताल छोडेको दोस्रो दिन मेरो रिपोर्ट आयो र अस्पतालले फोन गरेर बोलायो। अस्पताल पुग्दा कोरोना भाइरस भएको अर्थात पोजेटिभ रिपोर्ट आएछ, यो सुनेर म आत्तिएँ।
अस्पतालले अब एक्लै अस्पतालको छुट्टै कोठामा बसेर उपचार गराउनुपर्छ भन्ने जानकारी गरायो। मेरा लागि अस्पतालमा बस्नु भनेको जेल जीवन बिताएजत्तिकै कठिन थियो।
अस्पताल छोडे। अस्पताल प्रशासनले पनि लाचारी देखायो, उनले डाक्टरहरू स्वयं पनि रोगसँग डराएको पाएँ र आफ्नै जोखिममा आफैं उपचार गर्ने निर्णय सुनाउँदै घर फर्कें। अस्पतालले पनि कोरोना भाइरसको औषधी दिन नसक्ने उनले बुझेका थिए। ‘माघ २३ गते अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर घरमै बसी आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल आफैले गरें।’
अहिले भेटिएको नयाँ संक्रमित किशोरी पनि होम क्वारेन्टिनमा नै बसिरहेको भए त्यति आत्तिनुपर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। तर उनको सम्पर्कमा आएकाहरुको पहिचान गर्दै परीक्षण गर्दै आइसोलेट गर्ने चुनौति भने अब थपिएको छ।
आजको पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले हिजैबाट उनको सम्पर्कमा आएकाहरुलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने कार्य भइसकेको र विमानमा सँगै आएकाहरुको पहिचान गर्ने र त्यही दायरामा ल्याउने काम हुने बताएका छन्।
नेपाल सरकारले गएको मध्यरातबाट विदेशबाट कुनै पनि यात्रुवाहक विमान नेपाल आउन नपाउने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसैगरी लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारी साधनमा पनि आजदेखि रोक लागिसकेको छ। हामी आफै पनि नियमित साबुन पानीले हात धुने र अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक घरबाहिर निस्केनौँ भने संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। आतंकित होइन, सचेत बनौँ।
हवाई सम्पर्कका कारण कसरी चीनबाट संसार भर यो संक्रमण फैलियो भन्ने बारे न्युयोर्क टाइम्सले आज एकदम राम्रो भिजुअलाइजेसन गरेको छ। यहाँ क्लिक गरी हेर्नुस्।
As the coronavirus spread across China in early January, international travel continued as normal. Thousands flew from Wuhan to cities around the world.
By the time travel stopped in late January, it was too late. See how an outbreak becameapandemic. https://t.co/ZZAtxWmf5Q pic.twitter.com/71YtxJSDeN